Home > DataNumen mpiara-miasa
At DataNumen, mitady sy miarahaba ny fiaraha-miasa izahay mba hanitarana ny tratry ny tsena sy hanome ny mpanjifanay mpanjifa fanampinytary vokatra sy serivisy izay manatsara ny fampiasam-bolany sy ny traikefany DataNumen.
Manome loharanon-karena be dia be amin'ny programa mpiara-miombon'antoka mivoatra stratejika izahay; ao anatin'izany ny fiofanana, marketing, serivisy matihanina ary fanampiana.
Karazana DataNumen Partner Programs
Programme ho an'ny mpiara-miasa amin'ny Solution Solution
Ny mpiara-miombon'antoka amin'ny vahaolana orinasa no lakilen'ny DataNumenfandraisana andraikitra hanitarana ny fahazoana vahaolana amin'ny orinasa. DataNumen ary ireo mpiara-miombon'antoka aminy dia manome ny loharanom-pahalalana sy fahaizana ilaina mba hampihenana ny fatiantoka amin'ny loza voajanahary, hampitombo ny fahombiazan'ny asa ary hanatsara ny traikefan'ny mpanjifany.
Programme mpiara-miasa mpiray finoana
Ny programa Affiliate dia fotoana lehibe ahazoanao vola amin'ny fivarotana ny vokatra fanarenana data. Raha manana na mitantana tranokala iray ianao, dia afaka mandray anjara amin'ny programa afiliana misy anay. Miarahaba antsika rehetra izahay, manomboka amin'ny olona mitazona pejy fandraisam-bahiny kely ka hatramin'ny magazine, vavahady ary fivarotana.
DataNumen manolotra ny fahafahan'ny mpivarotra am-bola hiteraka fidiram-bola fanampiny amin'ny fidirana amin'ny DataNumen Fandaharana mpiara-miasa amin'ny mpivarotra. Ny fizotry ny fisoratana anarana tsotsotra dia hahafahanao ho tonga anisan'ny lehibe indrindra sy most fandaharana mpivarotra vokatra fanarenana angona mahomby.
Ny fifanakalozana rohy amin'ireo tranokala mifandraika amin'ny atiny dia fomba iray faran'izay tsara hamoronana fahalianana sy fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Ankoatry ny mpitsidika mifindra mivantana amin'ny tranokalanao avy amin'ny mpiara-miasa fifanakalozana rohy, ny tombony azo amin'ny fitomboan'ny fivezivezena ny motera fikarohana azo amin'ny alàlan'ny alàlan'ny rohy hyperlink dia mety lehibe koa.